Ny Blue Ventures dia fikambanana mpiaro ny tontolo iainana an-dranomasina miasa amin'ny fananganana indray ny jono nentim-paharazana sy hamerina ny fiainan'ny ranomasina. Manerana firenena 14, mpiasa 300+ no mametraka ny mpanjono ho lohalaharana. Miady ho an'ny zon'izy ireo izahay. Manohana azy ireo izahay mba hanatanteraka ny mety ho vitany. Izahay dia manome azy ireo izay rehetra ilainy hitantana sy hiarovana ny ranomasina amin'ny fomba mahasoa ny olona sy ny zavaboary.
Manolotra asa amin'ny asa isan-karazany izahay, manomboka amin'ny fandaharan'asa eny an-kianja ka hatramin'ny famatsiam-bola, fikarohana ka hatramin'ny fisoloana vava. Na inona na inona fahaiza-manaonao na haavon'ny asanao, ny fandraisanao anjara dia hanampy amin'ny fampitomboana ny fiveloman'ny mpanjono eo an-toerana sy hanohanana ny ranomasina mahasalama ho an'ny taranaka ho avy.
Iza no tadiavintsika
Ekipa mavitrika sy multidisciplinary izahay, manana kolontsaina matihanina misokatra. Mitady olona izahay:
Mino ny fametrahana ny mpanjono ho lohalaharana ianao ary manolo-tena amin'ny fanovana eo amin'ireo vondrom-piarahamonina iarahanay. Ampidirinao amin'ny zavatra rehetra ataonao ireo soatoavina ireo. Mianara bebe kokoa momba ny soatoavinay..
Tena entanina ianao amin'ny iraka ataonay, ary mizara ny vinay amin'ny fanovana ny fiarovana. Manana fahasahiana hanohy hatrany ianao rehefa misy olana.
Fantatrao ny toe-javatra sarotra iasanay ary mitady mpiara-miasa. Mankalaza ny fahombiazana ianao ary manentana ny hafa rehefa sarotra ny fandehanana.
Isika dia fikambanana mandroso haingana, mitombo haingana, izay tsy misy roa andro mitovy. Haingana ianao handray sy hampihatra hevitra mampanantena, ary faly mandray ny fitarihana amin'ny asanao manokana.
Miara-miasa amin'ny mpiara-miasa sy mpiara-miombon'antoka amin'ny firenena maro ianao, dia hahazo aina amin'ny tontolo iainana sy kolontsaina samihafa ary hankafizinao ny fahafahana mivezivezy.
Vonona hiaraka aminay?
Jereo ny fahabangan-toerana misokatra
Fotoana amin'izao fotoana
Tsy mahita zavatra ho anao amin'izao fotoana izao? Tsy manaiky CV tsy nangatahana izahay fa mamporisika anao hifandray aminay mba handraisana fanavaozana mailaka momba ny andraikitra ao amin'ny faritra mahaliana anao.
Mifandraisa amin'ny Blue Ventures
Fantaro bebe kokoa momba ny ekipanay
Tombontsoa ho ahy ny niasa tao amin'ny Blue Ventures hatramin'ny fahazazantsika teto Madagasikara, ary tena mirehareha amin'ny fiovana tsara vitantsika niaraka tamin'ireo vondrom-piarahamonina. Nanomboka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ireo mpanjono mitoka-monina sy voahilikilika indrindra ka hatramin'ny solontenan'ny Blue Ventures tamin'ny kaonferansa iraisam-pirenena tany Korea Atsimo sy Frantsa, dia nanana traikefa manokana sy matihanina aho teo am-pandrosoana ny fitantanana ny jono maharitra sy ny fiarovana ny ranomasina eto amin'ny fireneko.
Lalao AigraitteMpanolotsaina ara-teknika nasionaly
ho an'ny ala honko
“Tao anatin'ny efa-taona niasako tany Timor-Leste dia nandrisika ahy ny soatoavinay, indrindra ny fametrahana ny fiaraha-monina ho loha laharana. Tombontsoa iray ny mampivelatra ny asanao voahodidin'ny olona mizara ny fahalalany momba ny fomba fanompoana tsara indrindra amin'ireo vondrom-piarahamonina iarahantsika.”
Oldegar MassingaMpitantana ny Opérationnel, Timor-Leste
Fahasamihafana ao amin'ny Blue Ventures
Nandritra ny roapolo taona, niasa tamin'ny fomba hiatrehana ny tsy rariny ara-tsosialy miparitaka manerana ny fiarovana izahay.
Mino izahay fa ny fampiroboroboana ny fitoviana, ny fahasamihafàna ary ny fampidirana dia ivon'ny fanaovana asa fiarovana ho an'ny olona sy ny zavaboary, ary miasa mavitrika amin'ny fiantohana fa ireo fitsipika ireo no vato fehizoron'ny fifandraisantsika matihanina rehetra.
Mpampiasa mitovy izahay ary mamporisika ireo mpangataka avy amin'ny fiaviana samihafa mba hampihatra.
Fantaro bebe kokoa: Ny fanoloran-tenantsika
Vonona ny hiditra ao amin'ny ekipa?